Isbeddellada iyo Saadaasha Barnaamijka Caalamiga ah ee 2016 | Martech Zone
Waxaan ka qornay waxa barnaamij xayeysiis waa dabayaaqadii sanadkii hore wuxuuna wareysi weyn la yeeshay khabiir Pete Kluge ka soco Adobe mawduuca. Warshadu si xawli ah ayey u socotaa. Ma hubo nidaamyada iibsiga xayeysiiska ee dhaqameed ee u baahan faragelinta gacanta ee ku habboonaanta ayaa socon doonta. Xaqiiqdii, kharashaadka xayeysiinta barnaamijka ayaa la filayaa inay qaataan 63% suuqa bandhigga dhijitaalka ah dhamaadka sanadkaan sida ku xusan eMarketer.
Isku darka tiknoolajiyada xayeysiiska iyo teknolojiyada mar ayaa sii kordheysa sanadka 2016, iyadoo suuqleyda APAC ay ogaanayaan faa'iidooyinka bartilmaameedka wax ku oolka ah ee lagu gaarayo dadka saxda ah, oo leh xayeysiinta saxda ah, waqtiga saxda ah.
Waxaan ku dari karaa in nidaamyadan ay sidoo kale bartilmaameedsanayaan meesha saxda ah ee bartilmaameedka iyo juquraafi ahaantaba leh.
Maaddaama gaadhistu ballaadhayso iyo algorithms-ku sii wadaan inay noqdaan kuwo sax ah, suuqgeynta barnaamijku waa horumar soo dhaweyn ah. Awoodda ay u leeyihiin suuqleydu in ay kordhiyaan wax ku oolnimada dadaalkooda suuq geynta halkii ay ka ahaan lahaayeen a buufin oo tukada habka loo iibsado xayeysiiska ballaaran ayaa caawin doona warshadaha.
Kala soo bax Macluumaadka
Macaamiisha uma badna inay xayiraan xayeysiinta haddii ay rumaysan yihiin in xayeysiintu qiimo u leedahay iyaga. Ganacsiyadu way yareyn karaan kharashka ku baxa iibsiga, laga yaabee inay miisaaniyadda u beddelaan daacadnimo iyo sii hayn. Dhagsii infographic-ka si aad u aragto iftiinka sanduuqa ama ka soo degso MediaMath.
Tags: 2016tirakoobka xayeysiiskatirakoobka xayaysiintaisbeddellada xayeysiintaXayawaanmuuji tirakoobka xayaysiintaemealatamMediaMathsaadaasha barnaamijkaisbeddellada barnaamijkabuufin oo tukadaisbeddellada
Eventbrite + Teespring: Ku Iibi T-Shaati Tigidhadaada